म कसरी मेरो WIC खाद्य लाभ सन्तुलन थाहा पाउन सक्छु?
EBT ग्राहक सेवा कल गर्नुहोस् 1-844-892-2932 र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
तपाइँको खाना बेनिफिटहरूमा कुनै पनि सम्भावित परिवर्तनहरू छलफल गर्न तपाइँले तपाइँको WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
तपाईंले आफ्नो WIC क्लिनिक कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ठेगाना सहि छ।
तपाईंको पिन चार-अंकको गोप्य कोड हो जसले तपाईंलाई किराना स्टोरमा तपाईंको नेभाडा WIC EBT कार्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँको EBT ग्राहक सेवा नम्बर कल गर्न र तपाइँको कार्ड सक्रिय र पिन सेट नगरेसम्म तपाइँको कार्डले काम गर्ने छैन। चार नम्बरहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई सम्झनको लागि सजिलो छ।
EBT ग्राहक सेवा कल गर्नुहोस् १-1-844२-२892२ नयाँ पिन छनौट गर्नका लागि।
यदि तपाईंले गलत पिन प्रविष्ट गर्नुभयो भने, तपाईंसँग सहि संख्या प्रविष्ट गर्न तीन थप अवसरहरू हुनेछन्। चौथो प्रयास पछि, तपाइँले तपाइँको क्लिनिक कल गर्न आवश्यक हुनेछ तपाइँको पिन अनलक गर्न वा तपाइँ अर्को दिन बिहान १२:१० सम्म तपाइँको कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाईंको कार्ड हरायो वा चोरी भयो भने, यो तपाईंको क्लिनिकमा बदल्न सकिन्छ। तपाईंको EBT कार्ड हराएको / चोरी भएको महसुस हुने बित्तिकै, तपाईंको क्लिनिकमा तुरून्त कल गर्नुहोस् ताकि तिनीहरूले कार्ड निस्क्रिय गर्न सक्छन्; यसले तपाईंको सुविधाहरूलाई अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ। नोट: यदि तपाइँ निस्क्रिय गर्न कल गर्नुहुन्न र सुविधाहरू प्रयोग गरियो भने, तिनीहरू पुन: भण्डार गर्न सकिँदैन।
तपाईको व्यक्तिगत पहिचान नम्बर (PIN) तपाईको निर्दिष्ट प्रोक्सी बाहेक अरू कसैलाई भन्नु हुँदैन।
यदि मेरो कार्ड स्टोरमा काम गर्दैन भने के हुन्छ?
तपाइँको WIC EBT कार्ड दोस्रो पटक स्वाइप गर्न कहिलेकाँही चाहिने आवश्यक हुन्छ।
यदि चुम्बकीय पट्टी बिग्रिएको छ भने, क्यासियरलाई सोध्नुहोस् यदि तिनीहरू मैन्युअल रूपमा तपाईंको कार्डको संख्या प्रविष्ट गर्न सक्छन्। तपाईंले आफ्नो पिन प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ, क्यासियरलाई एक सहभागीको लागि पिन प्रविष्ट गर्न अनुमति छैन।
धेरै धेरै गलत पिन प्रयासहरू छन्? तपाईंको स्थानीय WIC अफिस कल गर्नुहोस् र तिनीहरूले तपाईंको पिन अनलक गर्न सक्छन्। वा, तपाई ग्राहक सेवा कल गर्न सक्नुहुनेछ १-1-844२-२892२ रिसेट गर्न वा फोनमा तपाईंको पिन परिवर्तन गर्न।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि स्टोरले त्रुटिपूर्ण बनायो तपाईंले कल गर्नुपर्दछ / क्लिनिकमा जानुहुन्छ जब तपाईं गल्तीको बारेमा सजग हुनुहुनेछ। न त स्टोर न डब्ल्यूआईसी क्लिनिकले आईटमहरू तपाईंको नेभाडा WIC EBT कार्डमा फर्काउन सक्षम छन्। तपाईंको क्लिनिक रिपोर्ट र / वा एक दावी फाइल गर्न राज्य WIC कार्यालय कल गर्न सक्षम हुनेछ।
के हुन्छ यदि म स्टोरमा आईटमहरू किन्न असमर्थ छु?
यसको कारण हुन सक्छ:
तपाइँको WIC खाद्य सन्तुलन यस आईटम खरीद गर्न को लागी धेरै कम छ।
यो तपाईंको शपिंग सूचीमा आईटम हैन वा साइज स्वीकृत भएको छैन।
यो एक चीज हो जुन WIC स्वीकृत उत्पाद सूचीमा थप्न आवश्यक छ।
तपाईंसँग अपर्याप्त कोष छ र तपाईंको क्लिनिकमा सम्पर्क गर्न आवश्यक छ।
यदि यो हुन्छ भने:
क्यासियरले तपाईलाई वस्तु खरीद गर्न दिनको लागि केही परिवर्तन गर्न सक्दैन।
तपाईंको खाना सन्तुलन जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंसँग पर्याप्त बाँकी छ भने, WIC UPC डाटाबेस जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग सहि आकार वा ब्राण्ड छ भने।
यदि तपाईं यो गल्ती हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, उत्पादन लेबलको फोटो लिनुहोस्, यूपीसी कोड सहित र तपाईंको स्थानीय क्लिनिक कल गर्नुहोस्।
तपाइँको पिन नयाँ कार्ड सेट अप गर्न।